चाउचाउ उद्योगलाई झड्का, पत्रु खाना विरुद्ध अभियान - Nepal News Site
चाउचाउ उद्योगलाई झड्का, पत्रु खाना विरुद्ध अभियान
काठमाडौं : बालबालिकाले खाना खाँदैन भनेर जङ्क फुड अर्थात् पत्रु खाना खुवाउनु त भएको छैन ? छोराछोरी रोए भने या भनेको मानेनन् भने फकाउनका लागि पत्रु खाना दिने चलन अहिले गाउँदेखि सहरसम्मको समस्या छ ।
चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट दिएर छोराछोरी फकाउने बुवाआमालाई थाहा छ कि छैन ? दिइएको खानेकुरा कति अस्वस्थकर र अखाद्य छन् भन्ने । पछिल्लो समय पाकेटको खानेकुरा अत्यधिक रूपमा खाइने र खुवाइने गरिन्छ ।
प्याकेटको खाना स्वस्थकर छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरैले आफ्नो तथा छोराछोरीको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गर्छन् । यसका विरुद्ध जनचेतना जगाउने उद्देश्यसहित विज्ञहरुले जंक फुड (पत्रु खाना) बहिष्कार सुरु गरेका छन् । यसै विषयमा करिष्मा केसीले पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेतीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
जंक फुड बहिष्कार अभियान किन ?
यो विभिन्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरु मिलेर सुरु गर्न लागिएको अभियान हो । यसको उद्देश्य भनेको अहिले पछिल्लो समय पत्रु खाना अर्थात जंक फुडमा विभिन्न पोषण तत्व मिलाएर बनाएका छौं भन्दै व्यापक प्रचार भईरहेको छ । त्यसलाई स्वस्थकर खाना भनेर बिक्री बितरण गर्दै आएका छन् । तर, कुनै पनि हालतमा जंक फुड स्वस्थकर खाना हुनै सक्दैन । हामी यो सन्देश सबै सामु पु¥याउन चाहन्छौं । त्यसैका लागि यो अभियान सुरु गर्न लागेका हौं ।
बजारमा पाइने जंक फुड बिना जीवन नै कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो अभियान त निकै चुनौतीपूर्ण देखियो ?
चुनौती त एकदम धेरै छ । हाम्रो बानी यस्तो बिग्रीएको छ की हामीले भविष्यलाई सोच्दैनौँ अहिलेको सजिलो मात्र हेर्छौं । विशेषगरी अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई छिट्टै खुसी बनाउन पत्रु खाना दिने गर्छन् तर त्यो खुसी पार्नको लागि त्यस्ता खानेकुरा दिने गर्दा बच्चाहरुको स्वास्थ्यमा कस्तो नराम्रो असर पु¥याउँछ भन्ने कुराको ख्याल गर्दैनौँ ।
त्यसैले कतिपय अभिभावकहरुले बच्चाहरुलाई स्कुलमा खाजा पठाउँदा पनि यस्तै पत्रु खाना पठाउने गर्दछन् । साथै स्कुलको शिक्षकहरुले पनि बुझ्दैनन् की यसले बच्चालाई नराम्रो गर्छ भन्न्ो कुरा । बच्चाहरु त खुसी नै हुने भए । उनीहरुलाई त केही पनि थाहा छैन । त्यसकारणले गर्दा पनि यसमा एकदमै ठूलो चुनौती छ ।
मेरै घरमा पनि यो पत्रु खाना खानु हँुदैन भनेर हटाउन खोज्दाखेरी कति धेरै समस्या परेको थियो र समय लागेको थियो । किनभने यति धेरै मात्रामा रेडियो टेलिभिजनबाट पत्रुखानाबारे भ्रामक विज्ञापनहरु आईदिन्छ त्यसले गर्दा बच्चाहरु हाम्रो कुरामा सहमत नै हँुदैनन् । धेरै विज्ञापन आएपछि मानिसहरु यो त राम्रो खानेकुरा हो भनेर त्यसकै पछि लाग्छन् । पत्रु खानाका व्यापारीहरुको आवाज ठूलो छ । हाम्रो आवाज सानो छ । यही नै मुख्य चुनौंती हो । तर, पनि यसो भन्दैमा हात बाँधेर बस्न त भएन । हामीले यस्ता भ्रामक विज्ञापनहरु रोक्नुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाई राखेका छौं ।
यस्ता पत्रु खानाले मान्छेको स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ त ?
करीब एक वर्ष अगाडी नेपाल सरकार र हेलन केलर इन्सिटीच्युट अन्र्तराष्ट्रीय संस्था मिलेर पत्रु खाना सम्बन्धि एउटा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यो अध्ययनबाट के देखियो भने यो पत्रु खानामा विशेषगरी चाउचाउ बच्चाहरुलाई एकदमै मनपर्छ । त्यसमा जती नुन मिसाईएको छ भनिएको हुन्छ, त्यो भन्दा दुई सय प्रतिसश सम्म बढी नुनको मात्रा मिसाईएको पाइयो ।
जब यो बच्चाले खान्छ उसको शरीरमा एकदम धेरै नुन जान्छ जसले गर्दा मृर्गौलामा समस्या गर्छ । अर्को कुरा के भने बच्चाहरुले यो पत्रु खाना खाईसकेपछि उनीहरुको तौल उकदम बढ्दै जान्छ । एकातिर तौल बढ्दै जान्छ भने अर्को तिर सुक्ष्म पोषक तत्वको कमी हुन्छ र विभीन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु देखीन थाल्छन् ।
मानिसको लत बसिसकेको छ, अहिले आएर पत्रुखानाबाट टाढा रहने कुरा सम्भव होला त ?
किन नहुनु एकदमै सम्भव छ । कत्ति जना मेरा साथीहरु जंकफुड बाट टाढा छन् र उनीहरुले अहिले आफ्ना बच्चाहरुलाई जंकफुड खुवाउदैनन् । किन सम्भव छ भने हामीसंग यती धेरै आफ्नै खानेकुराहरु छन् । मान्छेहरुले प्राय जंकफुड खाने कारण चै खाजा के खाने त भन्ने विकल्प नपाएर हो । खाजा भनेको नै पत्रु खाना जस्तो भइसक्यो ।
हामीसंग खाजाहरुमा यती धेरै विकल्पहरु छ जस्तै चिउरा, चना, अण्डा साथै हामीले हाम्रो चाडपर्व विशेषमा खाने खाने कुराहरु छन् । त्यसलाई विकल्पको रुपमा लिने भने यो सम्भव छ । सजगता अपनाउने हो भने पक्कै पनि सम्भव छ ।
साना बालबालिकाहरुलाई चाहिँ यस्ता पत्रु खानाबाट कसरी छुट्कार दिलाउने ?
यो कुरामा अभिभावकहरुले नै एकदम ध्यान दिनुपर्छ । किन कि उसले भनेको कुरा दिएन भने उ रोइदिन्छ भन्दैमा उसलाई सजिलै फकाउन पत्रु खाना किनीदिनु नै हँुदैन । बच्चाले रोएर म चुरोट खान्छु म रक्सि खान्छु भन्यो भने किनीदिनु हुन्छ त ? हुन्न नी । त्यसकारण बच्चा रोयो करायो भन्दैमा अभिभावकले त्यो किनी हाल्नु हँुदैन । सानो उमेर देखी नै आमाबुवाले बानी लगाइदिएको हुनाले बच्चाहरुले पिर्ने हो । सानै देखी त्यस्ता पत्रु खानाको बानी नलगाउनु नै उचीत हुन्छ ।